7 Qodob Oo Uu Ninku Ku Kasban Karo Qalbiga Gabadha Ka Garaadka Badan Ama Aqoonta Sare Leh | Gaaloos.com
Home » galmada » 7 Qodob Oo Uu Ninku Ku Kasban Karo Qalbiga Gabadha Ka Garaadka Badan Ama Aqoonta Sare Leh
7 Qodob Oo Uu Ninku Ku Kasban Karo Qalbiga Gabadha Ka Garaadka Badan Ama Aqoonta Sare Leh
Gabadha maskaxda badani waa ta awood u yeelata in ay dareenka iyo xiisaha ninka ay ku soo jeediso wax kasta oo ay qabanayso, waxa ay ku guulaysataa in ay si joogta ah isaga dhigto cidda qudha ee uu ninkeedu ku fikiro dareenkiisa oo dhamina daneeyo.
Laakiin dhibta ay gabadha garaadka badani (Fariiddu) leedahay waa iyada oo inta badan isku mashquulisa bal in ninkeedu la mustawe yahay dhinaca jacaylka iyo danaynta, iyo xataa dhinaca maskaxda iyo fariidnimada waxa aanay tan kala baxdaa qaabkiisa sheeko.
Haddii aad in uun ku fikirayso in aad guursato gabadh maskax badan adiga oo dareenkeeda iyo caqligeedaba kasbanaya waxa talo laguu siinayaa in aad qaaddo tallaabooyinkan soo socda, waxa aad arki doontaa adiga oo si rasmi ah u degey qalbiga fariidda.
3. Noqo Faduuli: Khubarada Cilmi nafsigu waxa ay sheegeen in gabadha fariidda ahi mar walba qabto dareen abuur ah oo u sheegaya in ninku uu dhaqan ahaan, fikir ahaan iyo aqoon ahaanba yahay faduuli. Sidaa awgeed talada la siinayo ninka jecel in uu hanto gabadha fariidda ahi waa in uu muujisto faduulinimo. Naftaada ku beer xiise badan oo aad ku muujinayso sida aad u jeceshay barashada waxyaabo badan oo cusub, uga sheekee khibradahaaga farsamo iyo waayo aragnimadaada iyo waxa aad jeceshay in aad mustaqbalka soo kordhiso. Marka aad la hadlayso gabadha fariidda ah ama xataa gabadh kale oo kasta waxa laguugula talinaya in aad ka gudubto sheekooyinka iyo su’aalaha soo jireenka ah, waxa aad ku dadaashaa in aad sheekadaa ka dhigto mid heerkeedu sarreeyo oo lagaga dhadhansan karo in qofka ku hadlay yahay qof garaad badan.
Tusaale ahaan haddii gabadh aad u aragto mid caqli iyo fariidnimo badan aad la kulanto weydii sababta ay ku dooratay mihnaddeeda ama aqoonteeda (Tusaale ahaan maxaad ku dooratay barashada sharciga, ama maxaad ku xiisaysay in aad siyaasadda aad u dhex gasho), waxa aad ka waraysataa raadka ay qoyskooda ku yeelatay aqoonteedu ama aragtideedu. Waxa hubaal ah in marka aad gabadha weydiiso su’aalo ka duwan kuwa caadiga ah ee ragga kale weydiiyaan ay isla markaba bilaabayso in ay ku xiisayso. Isku day in aad ka sheekayso sheekooyin gabadha u muujiya in ay kaa mustawe hoosayso garaad ahaan iyo waayo aragnimo ahaan, xataa haddii aad casho geyso isku day inaad siiso cunto aanay hore u aqoonin, waxa aad ogaataa in guud ahaanba dadka aqoonta leh iyo dadka garaadka badani ay yihiin dad jecel in ay mar walba tijaabiyaan wax cusub.
Title: 7 Qodob Oo Uu Ninku Ku Kasban Karo Qalbiga Gabadha Ka Garaadka Badan Ama Aqoonta Sare Leh